WhatsApp mapoka. ? Joinha WhatsApp Mapoka
WhatsApp mapoka. Whatsapp Ndiyo inonyanya kushandiswa pese pese kutumira runhare pasi rese, izvi zvakaguma nemazana whatsapp mapoka izvo vashandisi vakasika kuti vakwanise ita shamwari uye utaure pane dzimwe nyaya, zvinonaka kana zvaunofarira.
Isu takanyora Best whatsapp mapoka kuitira kuti vaverengi vedu vabatane nemapoka ezvavanofarira.
Iwe uchawana zvese izvi pachikuva MapokaWhatsapp.Online:
1 MaWhatsApp Mapoka: Iyo Yakazara Nhungamiro
2 Ndeapi ma WhatsApp mapoka?
3 Nzira yekujoinisa WhatsApp mapoka?
4 Whatsapp inobatanidza mapoka
4.1 Ndezvipi zvinongedzo zvemapoka WhatsApp?
5 Maitiro ekugadzira ma WhatsApp mapoka?
6 Sei kudzora WhatsApp mapoka?
7 Ungasiya sei WhatsApp boka?
7.1 Unogona here kusiya boka reWhatsApp pasina ivo vachiona?
8 Joinisa maWebhu eWhatsApp
9 Gadzira WhatsApp group link
MaWhatsApp Mapoka: Iyo Yakazara Nhungamiro
Iri peji ndiro Yizere kutungamira kune WhatsApp mapoka. Pano iwe uchadzidza zvese zvaunofanira kuziva kune kubatana nemapoka uye tora chikamu mavari kunyatsovadzidzisa. Iwe zvakare uchawana a Zadzisa rondedzero neakanakisisa WhatsApp mapoka kuti ubatane, yakakamurwa nemisoro. Kana iwe usingade kuverenga iyi yakazara giraidhi uye unoda kutanga kuongorora yedu, unogona kutsvaga.
Whatsapp Boka Inotsvaga
Ndeapi ma WhatsApp mapoka?
WhatsApp mapoka mapoka ayo chero mushandisi weWhatsApp mobile application anogona kuumba kuti abate hurukuro pakati peshamwari kana vashandisi vakasiyana pane imwe nyaya.
Tese tine akajairika WhatsApp mapoka seboka remhuri, boka revashamwari vekuchikoro, boka renhabvu, kana boka rema hangout evhiki ... asi neWhatsApp unogona gadzira mapoka pane ese marudzi emisoro uye bvumidza vashandisi kubva chero kupi zvako munyika kuti vaungane kuzosangana nevanhu, ita shamwari uye kukurukura dingindira reboka.
Nzira yekujoinisa WhatsApp mapoka?
Kana munhu gadzira whatsapp group, wedzera kuchikwata icho vanhu chaanosarudza mune yake runyorwa rweavo vavanoda kutora chikamu muboka iro. Parizvino chero munhu anogona kukuwedzera iwe kune yakatarwa WhatsApp boka pasina kukukumbira mvumo, asi Whatsapp Iwe wave kuto shanda patsva patsva kwaunofanirwa kugamuchira chikumbiro usati wawedzerwa kune rimwe boka. Kana boka rakagadzirwa, maneja weboka anogona kugovanisa webhusaiti yekusangana yevashandisi vatsva kujoina iro boka. Pane ino peji iwe unogona kuwana zvinongedzo zvezviuru zvemapoka aunogona kujoina.
Whatsapp inobatanidza mapoka
Ndezvipi zvinongedzo zvemapoka WhatsApp?
Izvo zvinongedzo kana zvinongedzo zvemapoka WhatsApp ivo (sekureva ini ndambokuudza), ma link anogovaniswa nevatariri kuitira kuti vamwe vanhu vabatanidze boka iro. Kana iwe uri maneja we whatsapp group iyo iwe yagadzira pane yako mobile, iwe unogona tora chinongedzo kubva muboka iro kukoka vamwe vanhu nenhanho dzinotevera:
Isa boka rawakagadzira.
Dzvanya "kugovana" kumusoro.
Sarudza sarudzo «Govera chinongedzo» kana sarudzo «Copy link».
Maitiro ekugadzira ma WhatsApp mapoka?
Kana uchifarira gadzira whatsapp group, unogona kuzviita nekutevera matanho ari pasi apa:
Dzvanya "Gadzira boka" kumusoro kwako kweWhatsapp application.
Wedzera boka revatori vechikamu pakati pevanosangana navo uye tinya pane "kutevera".
Isa zita reboka uye mufananidzo weboka racho uye wobva wadzvanya "gadzira".
Izvi zvaitwa, unogona kugovana chinongedzo kana chinongedzo cheboka rako reWhatsApp mukati MapokaWhatsapp.Online
Sei kudzora WhatsApp mapoka?
Dzimwe nguva, kurira kweWhatsApp notices kunogona kuve kunotsamwisa kana iwe uchigara uchigamuchira WhatsApp kubva kumapoka akasiyana. Izvi zvine mhinduro iri nyore kubvira uchikwanisa Ridza ako WhatsApp mapoka. Para ridza boka re whatsapp, iwe unongofanira:
Pinda iyo WhatsApp group raunoda kunyarara.
Sarudza sarudzo "kunyarara".
Sarudza sarudzo pakati pe mbeveve «Maawa masere», «8 vhiki» o "1 gore".
Imwe nzira simudza boka Izvo zvinotevera:
Senda chigunwe chako pamusoro peboka kuti ubvise kuruboshwe.
Ungasiya sei WhatsApp boka?
Siya boka reWhatsApp Zviri nyore. Iwe unongofanira:
Dzvanya "Siya boka".
Unogona here kusiya boka reWhatsApp pasina ivo vachiona?
Kana iwe uchida kusiya boka reWhatsApp pasina vamwe vatori vechikamu muboka vachiziva, ndine urombo kukuudza kuti hakuna sarudzo yakadaro panguva ino. Paunobva muboka, vamwe vese vanowana meseji muboka iro vachizivisa kuti wasiya boka.
Joinha maWhatsApp mapoka pachikuva chedu Zviri nyore.
Iwe unongofanirwa kutarisa kutsvaga pakati pe WhatsApp mapoka akabudiswa, uye kana iwe ukawana boka raunoda kujoinha, penya pane "Boka chinongedzo". Iwe unozoendeswa zvakananga kuWhatsapp uye iwe uchabvunzwa kuti uone kuti iwe unoda kujoina boka iri.
[Joinana neWhatsapp Mapoka]
Gadzira WhatsApp group link
Kana usati wawana whatsapp group iwe uri kutsvaga, ini ndinokukoka kuti uzvigadzire iwe uye uzvigove pachikuva chedu kuitira kuti vatori vechikamu vatsva vawedzerwe. Iye zvino unogona gadzira boka reWhatsApp uye ubudise.